मलाई जस्तो कुनै पनि नारी लाई नपरोस् सत्य कुरा लुकाउन खोज्दै छ नेपाल को कानुन ले. पल शाह ‘जस्तो अपराधी मान्छे ’ संग कहिल्यै भेट नहोस. समीक्षा अधिकारी – Sudur Samaj
मलाई जस्तो कुनै पनि नारी लाई नपरोस् सत्य कुरा लुकाउन खोज्दै छ नेपाल को कानुन ले. पल शाह ‘जस्तो अपराधी मान्छे ’ संग कहिल्यै भेट नहोस. समीक्षा अधिकारी
कहिले लर्बरिँदै, फेरि सम्हालिँदै उनी यहाँसम्म आइपुगेकी हुन्। अब चाहिँ निर्णायक लडाइँमा छिन्। आफूलाई प्रेमजालमा फँसाएर स्वार्थसिद्धी भएपछि लत्याउने पुरुषका विरु’द्धको लडा’इँ उनलाई जसरी पनि जित्नु छ ।
‘रियल हिरो’ कहलिएिका स्टारविरुद्ध जबर्ज’स्ती क’रणीको जाहेरी हालेयता उनले सामाजिक सञ्जालमा निकै तीखा प्रतिक्रियाहरू सामना गर्नुपर्‍यो।
सुरू (सुरूमा त्यस्ता प्रतिक्रियाहरू पचाउन निकै गाह्रो भएको थियो उनलाई। कमेन्टमा कसैले ‘रिप’ लेखेको देखिन् भने धेरैबेरसम्म बिथोलिन्थिन्। बारम्बार रुन्थिन्। ‘
उनले आफैंलाई जितिन्। आफूलाई जित्नु नै सबैभन्दा ठूलो जित हो’– दार्शनिक प्लेटोले भनेथे। उनी त दार्शनिक थिए, तर उनले त्यसलाई व्यवहारमा उतारिन्। हाम्रो कानूनले उनको उमेरको अंक हेरेर ना,’बालिग भन्यो। तर, उनी परिपक्व बनेकी छन्।
उनी अब ना,’बालिगमात्रै होइनन्, एक यो’द्धा हुन्। अघिल्लो हप्तासम्म दमौलीको सडकमा उनीविरुद्ध प्रदर्शित त्यो हजारौँको भीडले ना’राबाजी गरिरहँदा उनले त्यसलाई अंक मात्र सम्झिइन्। एउटा अबुझ भीडको संज्ञा दिइन्।
अहिले त्यो भीड साम्य छ । लुकेको छ। उनले त्यो भीडलाई सामना गर्ने हिम्मत देखाइन् र त उनी यो’द्धा बनिन्। दमौलीका सडकमा पी’डकको पक्षमा उर्लिएका र पी’डितलाई लगातार शब्दवाणले हा’निएका ती नि’शानाहरुलाई उनले मोडेकी छन्।
तर, बिस्तारै आफ्नो पक्षमा बढ्दो सहानुभूतिका कारण अहिले उनको मनोबल बढेको छ। हिजोआज उनले आफूलाई मानसिकरूपमा निकै बलियो बनाइसकेकी छन्।
जाहेरी दिएयता कलाकारिता क्षेत्रका धेरै मानिसहरूसँग उनको कुराकानी भएको छैन। केहीले उनलाई यो लडा’इँबाट नडग्मगाउन विभिन्न माध्यमबाट सन्देश पठाएका छन्।
स्क्या’न्डल बाहिर आएपछि आमरूपमा उनको विपक्षमा जनमत थियो। तर, अहिले माहोल बदलिएको छ। उनको पक्षमा पनि धेरै मानिसहरू खुल्न थालेका छन्। अहिले उनी भन्छिन्,
‘भगवान पल शाह जस्ता बोका संग कहिल्यै भेट नहोस।’ थप समाचार हेर्नुहोस । चलचित्र नायिका प्रियंका कार्कीमाथि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको छ। डिजिटल मुद्रा ‘क्रिप्टोकरेन्सी’को प्रचार गरेको आरोपमा ब्युरोले उनलाई अनुसन्धानको दायरमा ल्याएको ब्युरोका एक जना उच्च अधिकृतले हामीलाई बताए।
आइतबार उनलाई ब्युरोमा बोलाइएको छ। उनको बयान भइरहेको ब्युरोका ती अधिकृतले बताए। केही समयअघि सामाजिक सञ्जालमा भिडियो पोष्ट गरेर उनले भनेकी थिइन्–‘क्रिप्टोकरेन्सी मा मैले लगानी गरेको छु, तपाईंहरू पनि लगानी गर्नुस्।’
नेपाल राष्ट्रबैंकले क्रिप्टोकरेन्सी गैह्र कानुनी रहेको भन्दै त्यस्तो कारोबार गरेमा कानुनी कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ। क्रिप्टोकरेन्सीको प्रचार गरेको आरोपमा चलचित्र नायिका प्रियङ्का कार्कीलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले सोधपुछ गरेको छ।
आइतबार ब्युरोले बोलाएपछि महाराजगञ्जस्थित सीआईबीको कार्यालयमा गएकी कार्कीले प्रहरीसँग आफूले क्रिप्टोकरेन्सीको प्रचार नगरेको दाबी गरेकी छिन्। प्रहरीका अनुसार केही समयअघि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले डिजिटल मुद्रा ‘क्रिप्टोकरेन्सी’ बारे यस्तो पोष्ट गरेकी थिइन्–‘
क्रिप्टोकरेन्सीमा मैले लगानी गरेको छु, तपाईंहरू पनि लगानी गर्नुस्।’ ब्युरोका अनुसन्धान अधिकृतहरूसँग उनले सो पोष्ट आफ्नो नभएको दाबी गरेकी छिन्।
उनले भनेकी छिन्–‘यसमा म पनि अनभिज्ञ छु, मेरो संलग्नता छैन। सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्ने व्यक्तिबारे अनुसन्धान भइरहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रवक्ता (एसपी) श्याम कुमार महतोले हामीलाई बताए। उनले भने–‘उहाँले अनुसन्धानमा सघाउँछु भन्नुभएको छ, फोटो दुरुपयोग गरेर पोष्ट गरिएको हुनसक्छ हामी त्यसतर्फ अनुसन्धान गरिरहेका छौँ।’
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले क्रिप्टोकरेन्सी गैह्रकानुनी रहेको भन्दै त्यस्तो कारोबार गरेमा कानुनी कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ। अवैध डिजिटल मुद्रा ‘क्रिप्टोकरेन्सी’को प्रचार गरेको आरोपमा ब्यूरोले उनलाई आइतबार बयानका लागी बोलाएको थियो।
आफ्नो फोटो दुरुपयोग गर्नेबारे अनुसन्धान गर्न प्रियङ्काले आग्रह गरेकी छिन्। तर, उनले अनुसन्धानका लागि लिखित निवेदन दिएकी छैनन्। रातोपाटी
“कैलालीको अ’त्तरियामा घ’ट्यो प’त्यारै न’लाग्ने य’स्तो अ’च्चम’को घ’टना”